मौसमी रुघाखोकीबाट हुम्लामा ९ को मृत्यु, स्थानीय सरकार बेखबर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
औषधि अभाव, एन्टिबायोटिक २ दिनलाई
पुगेनन् चिकित्सक टोली
वैशाख १४, २०७६ जयबहादुर रोकाया, कलेन्द्र सेजुवाल
हुम्ला, सुर्खेत — हुम्लाको दक्षिणी भेगमा अवस्थित ताजाकोट गाउँपालिकामा मौसमी रुघाखोकीबाट तीन सातामा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले रोग निदान हुन नसके पनि मौसमी रुघाखोकीले मृत्यु भएको हुन सक्ने जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेमा ७६ वर्षीया उमकली मल्ल, ७० वर्षीया लालसरा रिठाल, ६० वर्षीय सुरजित खडका, ५५ वर्षीय लक्ष्य सुनार, ५५ वर्षीय बजिरी सुनार, ५५ वर्षीय वीरबल रिसाल, ५० वर्षीय रंगे कोली, ४ वर्षीया सुनकेसा सुनार र १० महिने रन्जती सुनार छन् । चैत २६ देखि शनिबारसम्म उनीहरूको मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत तुलसीप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दुई बालकको निमोनियाँ र झाडापखालाबाट मृत्यु भएको हो । अन्य मृतक लामो समयदेखि दम तथा श्वासप्रश्वासका बिरामी र मौसमी रुघाखोकीको मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
ताजाकोटको वडा नं. १ मा पर्ने जिमाना र काँडागाउँ तथा वडा नं. २ मा पर्ने मैला, तोलीबाडा र खटिकबाडामा प्रकोप बढी देखिएको छ । सुरुको चरणमा दैनिक ५०/६० बिरामी आउने गरेका थिए । अहिले यो संख्या २०/२५ जनामा झरेको मैला स्वास्थ्य चौकीका अहेव मोतिलाल जैसीले बताए । उनका अनुसार गाउँमा औषधि अभाव देखिएको छ ।
कोटि्रमोक्साजोल, एमोक्सोसिलन र सेपोटेक्सिनजस्ता एन्टिबायोटिक सकिएका छन् । यी औषधि १-२ दिनलाई रहेको अहेव जैसीले जनाए । 'पारासिटामोल र कफ सिरफ पनि बढीमा एक हप्तालाई पुग्लान्,' उनले टेलिफोनमा भने, 'यस्तै अवस्था रहिरह्यो र थप औषधि आएन भने त कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।'
ताजाकोट गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको थियो । उक्त औषधि मैला र मदाना स्वास्थ्य चौकीमा पठाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले त्योमध्ये आधा औषधि सकिएको बताए । 'रोग महामारीका रूपमा फैलियो भने औषधि अभाव हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्यसैले हामीले औषधि र चिकित्सकको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा माग गरेका छौं ।'
ताजाकोटमा मैला र मदाना गरी दुई स्वास्थ्य चौकी छन् । दुवै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब परीक्षणको सुविधा छैन । अनुमानको भरमा औषधि चलाइएको अहेव जैसीले बताए । उनका अनुसार गाउँमा अहिले पनि करिब ३ सय बिरामी छन् । 'हेर्दा सामान्य रुघाखोकीजस्तो देखिए पनि वृद्धवृद्धा र बालबालिका प्रकोपको उच्च जोखिममा छन्,' उनले भने, 'समयमै प्रकोपको निदान भई राम्रो उपचार भएन भने मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्छ ।'
चिकित्सक टोली पुगेनन्
औषधि अभावले पिरोलिइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा औषधिसहित चिकित्सकको टोली पठाएको छ । उक्त टोली नेपालगन्ज, बाजुरा हुँदै जाने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न तीन दिन लाग्नेछ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सुर्खेतबाट हिँडेको टोली आइतबार नेपालगन्ज भएर सोमबारसम्म बाजुराको कोल्टी हुँदै ताजाकोट पुग्ने बताए ।
यद्यपि संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरी आइतबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सुर्खेतबाट औषधि र चिकित्सकको टोली पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । 'हामीले गृह मन्त्रालयसँग प्रक्रियागत रूपमा कुरा गरी हेलिकप्टर माग गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'सम्भवतः भोलि -आइतबार) नै औषधि र चिकित्सकको टोली प्रभावित गाउँमा पुग्नेछ ।' चिकित्सकको टोली गाउँमा पुगेपछि मात्र वास्तविक समस्या के हो भन्नेबारे पत्ता लाग्ने उनले बताए ।
बेखबर स्थानीय सरकार
मौसमी रुघाखोकीको प्रकोप फैलिएको करिब ३ साता बित्यो । स्थानीय सरकार भने बेखबर छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जिल्लाबाहिर छन् । अध्यक्ष मल्ल र उपाध्यक्ष मञ्जु बुढा काठमाडौं हिँडेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीले बताए । उनी स्वयं पनि अहिले सुर्खेत छन् । 'नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने बेला भयो, कतै योजना पार्न सकिन्छ कि भनेर दुवै जना (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) काठमाडौं जानुभएको छ,' शाहीले भने, 'म पनि कार्यालयको कामकै लागि यहाँ (सुर्खेत) आएको छु, अज्ञात रोगले मान्छे मरेको कुरा यहीँ आएर सुनेको हुँ ।'
सदरमुकामबाट एकतर्फी ४ दिन पैदल टाढाको प्रभावित क्षेत्रमा सहज रूपमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पठाउन समस्या भएको छ । स्थानीय सरकारले प्रकोपबारे समयमै चनाखो भई सचेतना अपनाएको भए यस्तो अवस्था नआउने स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ २१:१२
नेता राईको चेतावनी, 'फोरम सरकारबाट बाहिरिन्छ'
काठमाडौँ — सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् ।
'संविधान संशोधनसहितको राजनीतिक सहमतिमा सरकारलाई दुई तिहाइ बनाउन सघायौं,' किराँत राई समाधिस्थल व्यवस्थापन समितिको तेस्रो अधिवेशनमा शनिबार नेता राईले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिअनुसार संविधानको बाधक एउटा चुकुल खोलिदिनोस् भनेर पटकपटक सम्झायौं । नसुनेरै एक वर्ष बित्यो ।'
नेता राईले राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधानको बाधक धारा संशोधन नभएकैले सरकारबाट बाहिरिएको बताए । 'सुखी नेपाली बनाउने हो भने सबैलाई समानुपातिक हक दिइनुपर्छ, आर्थिक समृद्धिको नाराले मात्र समानता आउन सक्दैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री अरूलाई समान देख्ने अवसर दिनु हुन्न । उहाँ बयलगाडाको गतिमा अगाडि बढिरहनुभएको छ । त्यसैले अब हाम्रो पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ ।' उनले मुलुकमा अहिले पनि पुरानै बेथिति दोहोरिइरहेको बताए ।
किराँत राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राईले मृत्युपछि समाधिस्थ गर्ने परम्परा भएका आदिवासी किराँत जातिलाई पशुपति वनकाली क्षेत्रको विकल्पमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । अधिवेशनले नयनकृष्ण राईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ २०:२०